Igbo, John: Lesson 115 - Mary Magdalin n'ili (Jọn 20:1-2) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 115 (Mary Magdalene at the graveside; Peter and John race to the tomb)
a) Mary Magdalin n'ili (Jọn 20:1-2)
1 Ma n'ubọchi mbu nke ízù ubọchi asa, Meri Magdalini biaruru ílì ahu n'isi-ututu, mb͕e ọ nāb͕a ọchichiri, we hu nkume ahu na akpọputara ya n'ílì. 2 Ya mere ọ b͕a ọsọ, biakute Saimon Pita, biakwasi kwa onye ọzọ ahu nke nēso uzọ Jizos, onye Jizos huru n'anya, si ha, Ha ebupuwo Onye-nwe-ayi n'ílì, ayi amaghi kwa ebe ha tọb͕ọrọ Ya.
Ndị na-eso ụzọ na ndị inyom ndị soro Jizọs gbasiri ike site na njedebe nke Friday. N'ebe dị anya, ndị inyom na-ele otú e si tinye Jizọs n'ime ili. Ma ndi nwanyi na ndi na eso ụzọ jiri ngwa ngwa laghachi n'ulo, ka ewe ghara ikwue ha maka imebi Sabat, malite n'ehihie n'ehihie, n'agbata elekere isii.
Ụbọchị izu ike, malite n'ehihie n'ehihie, n'agbata elekere isii.N'ụbọchị Izu Ike ahụ dị oke, nke kwekọrọ na Ememe Ngabiga, ọ dịghị onye ọ bụla nwere ike ịla n'ili ahụ. Dika ndi mmadu nwere obi uto n'echiche ahu na Chineke na mba ahu mekorita n'ile anya dika umu aturu ndi egburu egbu, ndi Kraist gbakotara egwu na iru uju. Olileanya ha dinara na olili Onyenwe ha.N'ụbọchị Izu Ike, ndị inyom apụghị n'ọnụ ụzọ ámá obodo ma ọ bụ ịzụta ihe nri na ihe ndị ọzọ maka ịmị ahụ. Ha na-echere anya maka ụtụtụ na Sunday. Onye na-ezisa ozi ọma na-eme ka nleta Magdalene gaa n'ili ahụ, ma e nwere ihe atụ nke ndị enyi nwanyị ndị ọzọ na Mary Magdalene ji otutu "anyị". Salome, nne Jọn na ndị ọzọ ndị ọzọ na-apụ na Sunday na anya mmiri maka mmanụ.
Ọ bụ n'isi ụtụtụ mgbe chi bọrọ mgbe ha biaruru nso, na-eru uju n'obi iru újú n'ili ahụ nke ha chere na a kara akara. Olileanya ha na-akụda mmụọ, obi erughị ala. Mmeri nke mbilite n'onwu adigh adaputabere ha, ndu ebighiebi abiaghi kwa n'obi ha.
Mgbe ha rutere, ụjọ tụrụ ha ịhụ nnukwu nkume ahụ, na-eche otú ha ga-esi mee ka ọ pụọ n'ọnụ ili ahụ.Oghere mepere emepe bụ ọrụ ebube mbụ n'ụbọchị, onye akaebe banyere nchekasị anyị na ekweghị ekwe na Kraist nwere ike iwepụ nkume niile na-ewute obi anyị. Onye kwere ekwe na-achọta enyemaka n'ime Chineke; okwukwe na-ahụ ọdịnihu dị ukwuu.
Jọn agwaghị anyị ihe ọ bụla banyere ndị mmụọ ozi pụtara. O yikarịrị ka Meri Magdalin agakwuru ndị enyi ya ma tụgharịa gaa n'ili ahụ. Ọ hụghị ozu ọ bụla. N'ịbụ onye ụjọ, ọ gbagara ndị na-eso ụzọ ya ọsọ ọsọ. O ji n'aka na isi nke ndịozi ahụ kwesịrị ịmara ọrụ ebube a na ndị ọzọ na-eso ụzọ. Mgbe Meri Magdalọn bịarutere Pita na onye na - eso ụzọ ya, ọ sịrị, "Ahụ nke Onyenwe anyị furu efu. N'ezie, onye were ya ma anyị amaghị ebe ya." Nke a bụ mpụ ọzọ. " Nke a na-egosi na ya na ndị na-eso ụzọ ya bụ ndị ìsì n'ụzọ ime mmụọ n'ihi na ha chere na mmadụ ezuola ozu ahụ. O meghi ha na Onyenwe anyi si na ndi nwuru anwuro bilie n'ihi naob Onye-nwe.
3 Ya mere Pita na onye ọzọ ahụ na-eso ụzọ pụrụ, ha wee gaa n'ili ahụ. Ha abụọ gbara ọsọ. Onye ọzọ nke nēso uzọ Jisus we me ka Pita pua, buru uzọ biarue ílì ahu. 5 Mgbe ọ hụrụ, ọ hụrụ na ákwà linin ahụ dinara, ma ọ banyeghị.
Nke a bụ agbụrụ maka ịhụnanya. Onye obula n'ime ha choro ibu ndi ozo nso Jisos. Peter, bụ onye okenye, na-elegharị anya na nwata ahụ bụ John, n'enweghị ike ijide ya. Ha abụọ chefuru egwu ha maka ndị nledo na ndị nche wee gafere n'ọnụ ụzọ ámá. Mgbe Jọn rutere n'ili ahụ, ọ bataghị, n'ihi nkwanye ùgwù miri emi ọ kwụsịrị.
Mgbe o lere anya n'ili nkume ahuru awara ya, o huru n'ime ubochi ka uwe akwa ahu di iche iche na-acha uhie uhie ma gbahapu dika chrysalis nke worm silk nwere. Uwe akwa ama adaha, edi aka iso odu ke itie. Nke a bụ nke atọ nke ọrụ ebube ndị jikọtara na mbilite n'ọnwụ. Kraịst adọwara uwe ya, kama o si n'aka ha pụta. Ndị mmụọ ozi ahụ akwagharịghị nkume iji nyere Jizọs aka, ma hapụ ụmụ nwanyị na ndị na-eso ụzọ ya. Onyenwe anyị gafere ebe nkume na-apụ.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, anyị na-ekele gị maka ibili na ndị nwụrụ anwụ. I meriri ihe ojo nile, we meghere uzo nye Chineke. Ị nọnyeere anyị na ndagwurugwu ọnwụ, ahapụkwala anyị. Ndụ gị bụ nke anyị; E mezuru ike gị n'adịghị ike anyị. Anyị na-ehulata n'ihu gị ma hụ gị n'anya n'ihi na ị nyere ndị kwere ekwe niile olileanya.
Gịnị bụ ihe àmà atọ nke mbilite n'ọnwụ Kraịst?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:52 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)